निकोसिया Info. About. What's This?
निकोसिया, राजधानी र साइप्रसको सरकारको सीट हो र यो सबै युरोपेली सङ्घ सदस्यको सबै भन्दा टाढा दक्षिण पूर्वमा छ । यो निरन्तर रूपमा ४५०० भन्दा बढी वर्षको इतिहासमा बाँचिरहेको छ र १० औँ शताब्दीदेखि साइप्रसको राजधानी भएको छ । निकोसियाको ग्रीक साइप्रस र टर्की साइप्रस समुदायहरूले १९६३ मा शहरको क्रमश: दक्षिण र उत्तरमा विभाजित गरिदिएका हुन् । १९५५-६४ को संकट पछि यो शहर तोडिएको थियो । टर्कीले सन् १९७४ मा साइप्रस र उत्तरी साइप्रस गणतन्त्रको बीचमा सैन्य बिरोधी बन्न पुगेपछि टर्कीले साइप्रसको द्वीपलाई आक्रमण गरेपछि उत्तरी निकोसिया सहितको द्वीपलाई उत्तरमा कब्जा गरे । आज उत्तर निकोसिया उत्तरी साइप्रसको राजधानी हो, केवल टर्कीद्वारा मान्यता प्राप्त एक राज्य, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा साइप्रेयी क्षेत्रमा कब्जा गरिरहेको मानिन्छ । १९६० मा निकोसिया साइप्रस रिपब्लिकको राजधानी बन्यो । यूनानी र टर्की साइप्रियट्स द्वारा स्थापित एक राज्य । १९६३ मा ग्रीक साइप्रस समुदाय पक्षले संविधानको संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । जुन टर्कीको साइप्रस समुदायले अस्वीकार गर्यो । बीजान्टिन समयमा, यो शहर पनि लेफकोसिया को रूपमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । चौथो शताब्दी ईस्वीमा, शहर बिशपिक को सीट बनेको थियो ।
साइप्रसको अवस्थित राजधानी ६४७ मा अरब आक्रमणका कारण सलामिस को विनाश पछि, निकोसिया लगभग ९६५ मा द्वीपको राजधानी बन्नपुग्यो । साइप्रसमा बीजान्टिन साम्राज्यको पुनरुत्थान भयो । बीजान्टिनहरूले निकोसियामा द्वीपको प्रशासन सीटमा मुख्य कारणले सुरक्षा कारणहरूका लागि तान्त्रिक शहरहरू अक्सर आक्रमणबाट पीडित थिए । त्यस बिन्दुबाट साइप्रसको राजधानीको रूपमा बनेको हो । निकोसियाले महान् हासिल गरे र साइप्रसको बीजान्टिन राज्यको सिट भयो । अन्तिम बीजान्टिन राज्यपाल ईसाक कमनेनोस थिए जसले आफैलाई द्वीपको सम्राट घोषित गरे र यस द्वीपमा ११८३ देखि १११९ सम्म शासन गरे ।
यसको विधायी र प्रशासनिक कार्यहरूको अतिरिक्त, निकोसियाले स्वयम को द्वीप को वित्तीय पूंजी र यसको मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । २०१५ मा, निकोसिया सापेक्ष क्रय शक्तिमा संसारको ६ औँ सबै भन्दा धनी शहर थियो ।
2. भूगोल र जलवायु
निकोसियासँग यसको निम्न वार्षिक वर्षा र वार्षिक तापमान दायराको कारणले गर्दा उपउष्ण प्रदेशिय जलवायु छ । शहरमा लामो, तातो, मुग्लुङ र सुकेको ग्रीष्मकालका अनुभवहरू पाउन सकिन्छ । जाडोमा धेरै वर्षाका साथै हल्का शीत हुन्छ । हिउँदको वर्षा कहिलेकाँही आर्द्रतासँग हुन्छ । हिउँदमा हिउँको संचय विशेष गरी दुर्लभ हुन्छ । जाडो रातको समयमा कहिलेकाहिँ हल्का चिसो हुन्छ । निकोसियाको लेफकोपा मौसम स्टेशनमा दोस्रो जुलाई २०१७ मा तापमान ४४.७ डिग्री सेल्सियस पुग्यो ।